Seychelles njem nlegharị anya na Mbipụta Ọhụrụ nke Spain nke Ihe ngosi Njem Dive
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles njem nlegharị anya na Mbipụta Ọhụrụ nke Spain nke Ihe ngosi Njem Dive
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Seychelles na Dive Travel Show
N'ịkwado ọhụhụ ya na Ahịa Spanish, ndị otu Seychelles njem nlegharị anya nọ na ihe ngosi njem Dive 2021, nke mere site na Nọvemba 20 ruo 21, 2021 na Madrid.
Akwụkwọ akụkọ Diving LetsDiveMag haziri, emume a raara nye njem nlegharị anya mmiri na ịkụ azụ na-elekwasị anya na ezumike ezumike, bụ ezigbo ohere maka. Seychelles idowe onwe ya na ahịa Spanish dị ka ebe njem nlegharị anya na-agba mmiri.
Onye nnochite anya njem Seychelles na Spen bụ Nwada Monica Gonzalez kwuru na n'ime emume ụbọchị abụọ a, ụfọdụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na-eme egwuregwu oke osimiri gụnyere mmiri mmiri, ịkụ azụ na ịkwọ ụgbọ mmiri gara ụlọ ntu Seychelles nwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ebe a na-aga.
Ms. Gonzalez kwuru, "Enwere m afọ ojuju maka nsonazụ nke nsonye anyị na-egosi njem njem mmiri mmiri dịka m kwuputara mmasị na-abawanye na ebe a na-aga, bụ nke na-ekwe nkwa nke ukwuu maka Seychelles," ka Nwada Gonzalez kwuru.
N'oge ngosi njem nlegharị anya 2021, Seychelles pụtara n'etiti ụdị ndị na-eduga na mpaghara mmiri mmiri na-egosi akụrụngwa na ihe ha na mmemme ahụ.
N'ịbụ ndị a ma ama maka ụdị ya dị iche iche, agwaetiti Seychelles na-enye ndị na-anụ ọkụ n'obi egwuregwu ihe ịma aka ka ha na-ekulite ọmarịcha okike nke agwaetiti ahụ. N'ịbụ ndị mmiri doro anya kristal gbara ya gburugburu, ebe ịwụ mmiri na-eju anya na ebe snorkeling, àgwàetiti ndị ahụ egosila na ha bụ ebe zuru oke maka egwuregwu mmiri ndị ọzọ sitere na kayaking ruo na ịkwọ ụgbọ mmiri.